Once UponaTime in China III (1993) ဒီဇတ်လမ်းကတော့ အများရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရာဇ၀င်မှာ ကျော်ကြားလှတဲ့ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူ သနားတက်သူ ကြင်နာတက်သူ သဘောကောင်းလွန်းသူ သိုင်းအကျော်အမော် ဒေါက်တာ ၀မ်ဖေးဟုန် အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး ကွန်ဖူးမင်းသားကြီး ဂျက်လီ မှ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်… အင်္ဂလိပ်လက် ကျရောက်နေပြီး လူတွေက စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြား အကျင့်တွေ ဖောက်ပြား နိုင်ငံခြားကို အထင်ကြီးစိတ်ဝင် ကိုယ့် လူမျိုးအချင်းချင်း အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ တောကြောင် လက်ခမောင်း ခက်တာတွေ က အစ စိတ်ထဲ မဟုတ်မခံစိတ် ၀င်ရောက်လာအောင် ရိုက်ပြထားခဲ့ပြီး ရင်သက်ရှုမောဖွယ် သိုင်းကွက် များကို လဲ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီကျော်တာမို့ မိသားစု နှင့် ကြည့်ရှုအပန်းပြေနိုင်သော ရုပ်ရှင်ကားကောင်းအဖြစ် ညွှန်းဆိုလိုက်ပါရစေ…. ဒီ ရုပ်ရှင်ကားကို Channel Myanmar Translator ဖြစ်သူ Jin Jin မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်… File Size : 900 MB /440 ...
IMDB: 6.8/10 5,251 votes
Once UponaTime in China II (1992) ဒီဇတ်လမ်းကတော့ အများရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရာဇ၀င်မှာ ကျော်ကြားလှတဲ့ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူ သနားတက်သူ ကြင်နာတက်သူ သဘောကောင်းလွန်းသူ သိုင်းအကျော်အမော် ဒေါက်တာ ၀မ်ဖေးဟုန် အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး ကွန်ဖူးမင်းသားကြီး ဂျက်လီ မှ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်… အင်္ဂလိပ်လက် ကျရောက်နေပြီး လူတွေက စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြား အကျင့်တွေ ဖောက်ပြား နိုင်ငံခြားကို အထင်ကြီးစိတ်ဝင် ကိုယ့် လူမျိုးအချင်းချင်း အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ တောကြောင် လက်ခမောင်း ခက်တာတွေ က အစ စိတ်ထဲ မဟုတ်မခံစိတ် ၀င်ရောက်လာအောင် ရိုက်ပြထားခဲ့ပြီး ရင်သက်ရှုမောဖွယ် သိုင်းကွက် များကို လဲ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီကျော်တာမို့ မိသားစု နှင့် ကြည့်ရှုအပန်းပြေနိုင်သော ရုပ်ရှင်ကားကောင်းအဖြစ် ညွှန်းဆိုလိုက်ပါရစေ…. ဒီ ရုပ်ရှင်ကားကို Channel Myanmar Translator ဖြစ်သူ Jin Jin မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်… File Size : 900 MB /350 ...
Braveheart (1995) IMDb 8.4 ရထားတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ အမေရိကန် ရှေးစစ်ကားတစ်ခု တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်ကတော့ စကော့ စစ်သူရဲကောင်းကြီး ၀ီလီယမ် ဝေါလေ့စ် နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာပါ။ အော်စကာ ဆန်ကာတင် ၁၀ နေရာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဆု နဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ ဆု အပါပအ၀င် ၅ ဆု တိတိ ဆွတ်ခူးသွားခဲ့တာပါ။ ပထမ စကော့တလန် လွတ်မြောက်ရေး စစ်ပွဲ ဦးဆောင်ခဲ့ တဲ့ စစ်သူရဲကောင်း ၀ီလီယံ အကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာ ( Blind Harry's epic poem The Actes and Deidis of the Illustre and Vallyeant Campioun Schir William Wallace) ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃ ရာစု အင်္ဂလန်ဘုရင် ပထမအက်ဒ်ဝက် လက်ထက်မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်ကြီးကို ...
IMDB: 8.4/10 776,743 votes
The Founder (2016) IMDb 7.2 rotten tomatoes 84% တို့ရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားက​တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်​ကြီးတဲ့ McDonald's ဟမ်​ဘာဂါဆိုင်​ရဲ့တည်ထောင်​သူ Ray Kroc ရဲ့အ​ကြောင်းရိုက်​ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် အသက်​၅၂နှစ်အရွယ်ယောကျာ်းတစ်ယောက်​ အောင်မြင်မှုရဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ.... လူတိုင်းကြည့်​သင့်​တဲ့ကား​ကောင်းလေးတစ်​ကားပါ (ဇာတ်လမ်း အညွန်း နဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Kaung Myat Thu ပဲဖြစ်ပါတယ်) Tariq L Walker File Size : 1 GB / 330 MB Quality : Bluray 720P Running Time : 1hr 55minutes Format : Mp4 Genre : Biography, Drama, History Encoder : Tariq L Walker Download Here Yoteshin Link Download Here Bluray 720p (1 GB) Openload Link Download Small File Size 360p (330 MB) ...
Once UponaTime in China I (1991) ဒီဇတ်လမ်းကတော့ အများရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရာဇ၀င်မှာ ကျော်ကြားလှတဲ့ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူ သနားတက်သူ ကြင်နာတက်သူ သဘောကောင်းလွန်းသူ သိုင်းအကျော်အမော် ဒေါက်တာ ၀မ်ဖေးဟုန် အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး ကွန်ဖူးမင်းသားကြီး ဂျက်လီ မှ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်... အင်္ဂလိပ်လက် ကျရောက်နေပြီး လူတွေက စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြား အကျင့်တွေ ဖောက်ပြား နိုင်ငံခြားကို အထင်ကြီးစိတ်ဝင် ကိုယ့် လူမျိုးအချင်းချင်း အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ တောကြောင် လက်ခမောင်း ခက်တာတွေ က အစ စိတ်ထဲ မဟုတ်မခံစိတ် ၀င်ရောက်လာအောင် ရိုက်ပြထားခဲ့ပြီး ရင်သက်ရှုမောဖွယ် သိုင်းကွက် များကို လဲ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီကျော်တာမို့ မိသားစု နှင့် ကြည့်ရှုအပန်းပြေနိုင်သော ရုပ်ရှင်ကားကောင်းအဖြစ် ညွှန်းဆိုလိုက်ပါရစေ.... ဒီ ရုပ်ရှင်ကားကို Channel Myanmar Translator ဖြစ်သူ Jin Jin မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်... Thit San Khant ============ Download HD (1.4GB) Download Small ...
Cleopatra ( 1963 ) ကလီယိုပက်ထရာဆိုတဲ့ ချောမောလှပပြီး ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များလှတဲ့အီဂျစ်ဘုရင်မကို အကြောင်း သိပ်မသိဘူးဆိုရင်တောင် ဒီနာမည်ကမစိမ်းလှပါဘူး..သူ့အကြောင်းကိုဇာတ်လမ်းရိုက်ကူး ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် 1963 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ IMDb Rate ကလည်း 7.0 အတိရရှိထားပါတယ် Rotten Tomatoes ကတော့ 55% ပါ ကလီယိုပက်ထရာအဖြစ် Elizabeth Taylor ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် Elizabeth Taylor ဟာ 1950 ခုနှစ်တွေမှာတော့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေထဲက တစ်ဦးအပါအ၀င်ပဲဖြစ်ပါတယ် 1932 Feb 27 မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့သေဆုံးပြီးဖြစ်ပါတယ် 2011 March 23 ရက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ကလီယိုပက်ထရာဆိုတဲ့ ချောမောလှပပြီး ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များလှတဲ့အီဂျစ်ဘုရင်မကို အကြောင်းသိပ်မသိဘူးဆိုရင်တောင် ဒီနာမည်ကမစိမ်းလှပါဘူး. ကလီယိုပက်ထရာဟာ သူမရဲ့အာဏာတွေပါဝါတွေကိုင်မြဲဖို့အတွက် ရောမ အုပ်ချုပ်သူတွေကိုသွေးဆောင်ပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ် ရောမဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Mark Antony မှပဲသူဟာချစ်မိခဲ့ပါတော့တယ် သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းတွေက တချိန်တုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ ကံကြမ္မာကိုဘယ်လိုများ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စေခဲ့မလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး ခေတ်ကာလများကြာညောင်းခဲ့မှုကြောင့် dvdrip ကွာလတီသာရနိုင်ပါတော့တယ် ကောင်းမွန်စွာကြည့်လို့ရပါတယ်..၂ ပိုင်းခွဲတင်ပေးထားပါတယ်..အဆင်ပြေကြပါစေ Quality : DvdRip Review And Encoded By ~ LK ~ Subtitle : Myanmar ...
IMDB: 7.0/10 22,429 votes
Jackie (2016) IMDb (7/10)...Rotten Tomatoes (89%) ကျွန်တော် La La Land ဇာတ်ကားကို ပိုကြိုက်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ယခု Jackie ဇာတ်ကားထဲက Natalie Portman သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ Emma Stone ထက် အဆများစွာ သာခဲ့တယ်။ ယခုဇာတ်ကားကိုလည်း ရုံမှာကြည့်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့တဲ့အတွက် SD version လေးပဲကြည့်ခဲ့ရတယ်။ သမိုင်းမှာ America ရဲ့ နာမည်ကျော် သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ John F. Kennedy ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူ Jacqueline Kennedy Onassis ရဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ Biographical ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုပေမဲ့ တစ်ခြားဇာတ်ကားတွေနဲ့ ကွာခြားတာတစ်ခုက ယခုဇာတ်ကားက ခင်ပွန်းဖြစ်သူလုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နေ့ ရက်တွေက သူမရဲ့ ဘဝကို ပိုမိုအာရုံထားပြီး တင်ပြထားတာပဲ။ ထို ...